စနေလင်း| March 5, 2013 | Hits:13,240
R.zar March 5, 2013 - 9:04 pm ၈၈ တုံးကလည်း စိန်လွင် မဟုတ်ဘူး။ သူ့ ဆရာဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။
Reply papa soe March 6, 2013 - 6:16 am very stupid to sueapresident …. who thinks they can sue and prison him??? meaningless……
Reply Mr Kian March 6, 2013 - 9:51 am GOOD JOB…
Reply U Wai Sar Ya March 6, 2013 - 6:32 pm နံရံကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်နဲ့ သူ့ဘာသာသံဃာဂိုဏ်းသင့်လိမ့်မယ်
Replyုkumudra March 7, 2013 - 6:42 am နာမည်ကြီးချင်တဲ့ ပညာကောင်းကောင်းမတတ်တဲ့သူတွေကို သမ္မတကို တရားစွဲဘို့ မြှောက်ပေးနေတဲ့ ပညာနဲနဲပိုတတ်တဲ့ နာမည်ကြီးချင်တဲ့ အာဏာရူးတွေ နောက်မှာရှိမှာပေါ့ ။ စိတ်ပျက်စရာဘဲ ။
Reply min min March 7, 2013 - 3:36 pm ဆဒ္ဒန်ဟူစိန် ရဲ့ တပည့် ဆဒ္ဒန်သိန်းစိန်